Home Wararka (XOG) Ethiopia oo soo food saartay cabsi, farahana kala bixi doonta arrimaha...
(XOG) Ethiopia oo soo food saartay cabsi, farahana kala bixi doonta arrimaha Soomaaliya
Warar lagu kalsoon yahay oo laga helaayo xukuumada Adis Ababa ayaa lagu so warinayaa in dowlada Ethiopia ay soo foodsaartay cabsi xoogan oo ayka qabto Dowladaha Koofurta Suudaan, Suudaan & Masar.
RW Abiy Axmed oo mar la hadlaayay koox siyaasiin Amxaaro ah ayaa u sheegay in faragalinta ay ku hayaan siyaasada Soomaaliya ay saameny ku yeelatay daganaashaha Ethiopia.
Dhawaan ayeey aheyd markii Dowlada Suudaan qabsatay dhul horay uga haysteen Ethiopia,
Dadka siyaasada kafaalooda ayaa ku qeexay dhaqdhaqaaqa ciidan ee dowlada Suudaan ka wado xadka ayl a wadaagto Itoobiya aay tahay dagniin kama danbeys ah oo la siinayo xukuumada Adis Ababa taaso saaran laba qadiyadood oo xoogan.
Buuxitaanka Wabiga Nile.
Faragalinta Arrimaha Doorashooyinka Sooomaaliya
labadaasi qadiyadood ayaa dowlada Itoobiya isku dayeeysay ineey sidii aay doonto u maareeyso waxeeyna dhaawaceysa danaha dowladaha Sudan, Masar, Imaraatka & Sacuudiga.
Dhaqdhaqaaqa aay wado Suudan ayaa ku abuurtay xukuumada Adis Ababa in aay dib ugu gurato dhaqdhaqaaqeda Soomaaliya aay ka wado.
2021 Soomaaliya waxeey wajaheysaa loolankii ugu adkaa abid iyadoo dalka uu hoggaanka u hayo Madaxweynihii ugu garaadka yaraa ee taariikhda hoggaamiyayaasha soomaray Soomaaliya .